★INDAWO ENGEYIMPELA★ Ifulethi eliseduze ne-AIRPORT JMC 6
Ibhilidi leCiudadela Complex liyindawo ephephile nenethezekile, esendaweni ekahle esendaweni emaphakathi kakhulu eLlangrande, esendaweni eyigolide ye-llanogrande, ngaphakathi kweCiudadela, eduze kwezitolo ezinkulu kanye eduze nezindawo eziningi zokudlela, isikhungo sokuthenga saseJardines (uhambo lwamaminithi angu-5. ) kanye nama-ATM. Kuseduze kakhulu nesikhumulo sezindiza i-Jose Maria Cordoba, indawo egcwele i-gastronomy nempilo yasebusuku..
Leli fulethi elitholakala kahle lisezingeni lesi-4 lesakhiwo saseCiudadela Complex.
Ifulethi lisuka ku-30-35m2 futhi linekamelo lokulala elingu-1 elinombhede wendlovukazi nombhede usofa, namashidi ombhede namathawula, ikhabethe, i-TV, i-WIFI, igumbi lokugezela elilodwa. Ikhishi lihlome ngokugcwele isiqandisi, isitofu sikagesi, i-coffeemaker, i-blender, namathuluzi ayisisekelo owadingayo ukupheka noma ukujabulisa ekhaya. kanye nebha enezihlalo ezi-2
Lesi sakhiwo sitholakala eLlanogrande, isikhungo sokuthenga esifushane saseJardines. Futhi, uzothola izindawo zokudlela eziningi, amabhange, izitolo zezidakamizwa, izitolo ezinkulu ezifana ne-Euro ne-Carulla, nezitolo zezitolo.
- 50 Amamitha zokudlela (lapho Nita, ukudla Mexican, pizza)
- 5 km sezindiza uJose Maria Cordoba.
Inombolo yepholisi: 101662